Nghọta zuru ezu gburugburu: Mkpụrụọrụ Funnel na ntinye maka Salesforce | Martech Zone
N'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ịre ahịa na ire ahịa anaghị arụ ọrụ n'ọkwa egwuregwu. Ọrụ ahịa B2B nwere CRM sistemụ dị ka Salesforce iji tụọ arụmọrụ, gụnyere usoro ụlọ ọrụ zuru oke na nkọwapụta nke otu na arụmọrụ otu. Ebe ọ bụ na usoro CRM na-arụ ọrụ dị ka de facto sistemụ ndekọ maka inweta ego na ọtụtụ ụlọ ọrụ, otu ndị ahịa nwere data nwere ike ikwenye na C-suite.
Ndị otu azụmaahịa na-eji azịza azịza dị iche iche iji mepụta mkpọsa na tụọ ihe na-eme na elu nke olulu ahịa ahụ. Mana ọtụtụ enweghị ike ịkụ ala iji hụ ihe na-eme ozugbo enyere ndị ahịa aka na ahịa. Ihe omuma zuru ezu, Ahịa arụmọrụ management usoro nke ewuru 100% na Ọrụ Salesforce Cloud®, na-eweta ọnụ ahịa na ịre ahịa data ọnụ, na -emepụta otu isi iyi nke eziokwu data.
Ihe omuma zuru ezu zuru oke na-eweputa ihe omuma banyere ntinye aka na ntinye aka na ntinye ahia ma mee ka ndi otu ahia na ahia ahia. Ihe doro anya na-eme ka ndị ahịa na ndị isi ahịa na-eme mkpebi ka mma nke na-abawanye arụmọrụ mkpọsa, mee ka pipeline na ego nweta ego, na ịchụpụ ahịa ROI dị elu.
Full Circle si Ngwọta Njikwa azịza na-enye ndị ọrụ data ahịa zuru oke - gụnyere inyeaka mkpọsa ahịa Salesforce - ha kwesịrị ịchụpụ ego ha nwetara. Dochie mpempe akwụkwọ dị mgbagwoju anya na ezighi ezi, akụkọ ezughi oke, Nzaghachi Nzaghachi na-ewepụta nghọta doro anya, nke ziri ezi nke na-egosi nsonaazụ arụmọrụ ahịa, na-eme ka a na-eto eto, nweta Salesforce ROI, na-edozi ahịa na ahịa, ma na-eme ka atụmatụ nwere obi ike.
Njikwa nzaghachi na-enye ụzọ iji soro nzaghachi ndu na ọkwa ọ bụla ma nyefee echiche mechiri emechi, site na isi na nsonaazụ. Ọ na-enyekwa usoro ntụgharị ntụgharị zuru oke nke na-enye ndị ahịa na ndị ahịa ahịa aka ịchọpụta mmebi usoro, dị ka isi aka ebe ndị na-eduga na-ada site na mgbawa ahụ, yabụ ha nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ ọnụ iji bulie ohere.
Usoro ihe ngosi mgbasa ozi na-achọpụta nke ọma usoro mgbasa ozi na-emetụta pipeline na ego ha nwetara, na-eme ka njikarịcha nke ngwakọta ahịa. Usoro ọnụọgụ ọnụọgụ azụmaahịa na ikike njiri mara ndị ọrụ na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta visibiliti na nyocha akaụntụ ma na-atụle ịdị irè n'ofe akụkọ na ngalaba.
Full Circle si Onye na-eme egwuregwu Ngwaahịa na-eme ka ndị ọrụ jikọọ ntụpọ n'etiti ụzọ na akaụntụ ka ha nwee ike itinye aka ma tụọ atụmatụ ABM n'ụzọ dị irè karị. Na Matchmaker, ndị ọrụ nwere ike iji aka ha tinye aka na akaụntụ dị iche iche ma na-ejikwa amamihe na-ejikwa ụzọ mbata, na-ejikọ onye ọ bụla na-eduga na akaụntụ ziri ezi dị ka akụkụ nke usoro ahịa na azụmaahịa akaụntụ.
Ijikọ ntụpọ na njikọ akaụntụ dị iche iche n'ime Salesforce, Onye na-egwu egwu na-eji "nhụjuanya na-adaba" na interface onye na-adọkpụ na-dobe iji mee ka iwu nhazi usoro nhazi dị mfe, na-eme ka ọ dị mfe iji mee ka a ghara ịhụ anya. Ọ na - ekenye ndị nwe ya ihe site na iwu enwere ike ịhazi ya ka enwere ohere ọ bụla wee chụsoo ya, na - eme ka nzaghachi ndị na - eduga na ntinye aka.
Onye na-eme egwuregwu na-emekwa ka ọ dị mfe ịkọwapụta na ịtụle akụkọ ndị na-eweta ego kachasị, na-enye ọhụụ zuru oke na mmemme akụkọ ihe mere eme na usoro arụmọrụ maka akaụntụ ọ bụla. Ike nhazi onwe ya nke na-agbanwe agbanwe na-eme ka ihe ndozi na-akpaghị aka, ntụgharị na iwu ọrụ dị mfe site na ikwe ka ndị ọrụ họrọ mgbe ndị ndu ga-atụgharịrị na kọntaktị ma ọ bụ setịpụ ọrụ na-akpata maka onye nwe akaụntụ ziri ezi itinye aka na ndu.
Full Circle si Mgbasa Ozi Mgbasa Ngwaahịa na-enye ndị ọrụ ohere ịgbaso arụmọrụ mkpọsa na Salesforce maka echiche zuru oke banyere etu mmemme mmemme si enweta ego. Site na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi, ndị isi ahịa na-enweta nghọta ziri ezi maka ịme mkpọsa iji gbasaa mkpebi ngwakọta nke ọma, gụnyere ọhụhụ n'ime mkpọsa ọ bụla nwere mmetụta na ohere ọ bụla.
Dị ka akụkụ nke Full Circle Response Management ma ọ bụ dị ka ngwaahịa na-enweghị atụ, Mgbasa Ozi Mgbanwe na-agbanwe otú ndị ahịa na-esi na-atụle ma tụọ arụmọrụ mkpọsa na Salesforce na ụdị njirimara ahaziri ahaziri yana ngwaọrụ ịme ngosipụta na-apụ. Ọ na-enye nkọwa zuru ezu banyere etu mmemme mmemme zuru oke si arụ. Ọ gụnyekwara ntinye ego na nyocha nyocha nke pipeline nke nwere ike ịkewaa site na ụdị mkpọsa, nha ndị ahịa na isi mmalite yana echiche ndị na-ewu ewu.
Mgbasa mgbasa ozi na-enye ndị ọrụ ohere ịdị na-ebu ibu site na otu ụdị mmetụ aka ma ọ bụ imetụ ọtụtụ aka ma ọ bụ mepụta ihe atụ dabara na usoro ahịa ha na ebumnuche ahịa ha, gụnyere ike ịhazi ọtùtù, tinye ihe mgbanwe dị iche iche na iji ihe atụ atụ. Mgbasa Ozi Mgbasa ozi na-echekwa data njirimara ziri ezi n'ime Salesforce, na-enye ndị ọrụ ohere ịbanye n'ime nkọwa granular n'akụkụ akụkụ ọ bụla ma mepụta usoro arụmọrụ siri ike, kwenye.
Dijitalụ Source Tracker
Ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ kwesịrị ịlele arụmọrụ ahịa dijitalụ iji nyochaa etu na ebe kachasị mma iji azụ ahịa ahịa. Taa, pịa site na mgbasa ozi dijitalụ, ọwa mmekọrịta, na isi mmalite ntanetị ndị ọzọ enweghị njikọ na ndu n'ime CRM. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ijikọ aka mmetụ dijitalụ a na-amaghị aha ha mara nke ọma, na-aza ndu n'ime usoro ị nweta ego na nzukọ.
Gburugburu zuru Dijitalụ Source Tracker na-agbakwunye ọrụ a n'elu ngwaahịa metric anyị, Njikwa Nzaghachi. Ọnụ, ngwaahịa ndị a weghaara itinye aka na ntanetị na ntanetị, gụnyere mmetụ na-enweghị aha, site na ọtụtụ ọwa, usoro na sistemụ nke ndị na-ere ahịa, iji tụọ ịdị irè nke usoro ịzụ ahịa zuru oke ha na ntinye aka na pipeline na ego ha nwetara.
Banyere nghọta zuru ezu
Full Circle Insights na-anapụta ahịa na ire ahịa tụọ ihe ngwọta iji bulie ngwakọ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ma mee ka ego nweta ego. Companylọ ọrụ ahụ na-enye njimara aka dị iche iche, metric zuru oke na teknụzụ njikwa ụzọ. Wuru 100% na Salesforce Service Cloud®, Full Circle Insights 'ngwaahịa mejupụtara na-eduga ahịa akpaaka ngwọta.
Full Circle Insights bụ ikpo okwu ịchọrọ iji tụọ mmetụta azụmaahịa ma bulie azụmaahịa gị. Anyị ejirila afọ itoolu rụọ ụlọ ọrụ zuru oke nke na-agbakọ ma tụọ mkpọsa niile, mmemme, mmemme na ọwa n'otu ebe. Ihe ikpo okwu anyi mejuputara onu ahia gi ugbu a ma weta data sitere na ahia ahia gi di iche iche n’ime CRM n’otu uzo tozuru oke maka nyocha ihe omuma. Nke kachasị mkpa, nyiwe anyị na-enye gị nghọta na akụrụngwa iji melite mkpọsa na mmemme iji mee ka mmetụta kachasị na azụmahịa gị.
Hazie Ihe Omume zuru ezu
Tags: abmnjikwa akaụntụ na-achịkwaDijitalụ Source Trackernghọta zuru ezufuzzy kenha